हेमा मालिनीसँग विवाह गर्न चाहन्थे जीतेन्द्र तर मण्डपमै छाडिन् हेमाले!
मद्रासमा अब के हुनु थियो? उनीहरु पुगेपछि त्यहाँ कुनै फिल्मी दृश्य भन्दा केही कम भएन।
उता जीतेन्द्रको गर्लफ्रेण्डले उनीसँग सोधिन् की ‘यो सब के भइरहेको छ?’ जीतेन्द्रले जवाफमा उनीसँग विवाह नगरि हेमासँग विवाह गर्ने भन्दै आफनो सम्बन्ध तोडिदिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ३०, २०७४ ०६:२१:४६